Manjaro 21.1.2 akauya neLinux 5.14, Plasma 5.22.5 uye WINE 6.16 | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.1.2 (2021-09-04) yakauya neLinux 5.14, Plasma 5.22.5 uye WINE 6.16
Maawa mashoma apfuura, timu yekuvandudza iri kumashure kweiyi Arch Linux-based distro yakaburitsa vhezheni itsva yakagadzikana uye ISO nyowani. Asi ivo havana kufanana? Kwete nguva dzose. Dzimwe nguva ivo vakawana dambudziko kugadzirisa mumifananidzo, ivo vakaburitsa yakagadzika mitsva yekumisikidza zviripo uye kwete zvitsva zveIO. Chii vakakanda husiku hwapfuura hwaive Manjaro 21.1.2, Pahvo yechipiri poindi yekuvandudza.
Manjaro 21.1.2 yakasvika mazuva masere mushure vhezheni yapfuura uye panguva imwechete seManjaro 2021-09-04, sezvazvinofanira kuva. Izvo hazvina kuuya nenhau huru, kunyangwe, senguva dzose, vashandisi veKDE ndivo vanonyanya kubatsirwa, nekuti pakati pemapakeji akagadziridzwa ndeaya eKDE Gear 21.08.1 uye Plasma 5.22.5, asi kwete iwo emaFreyimu 5.86 sezvo yakaburitswa maawa zvisati zvaitika.
Pfungwa dzeManjaro 21.1.2 Pahvo
Panguva ino ivo chete vakacherekedza kuti mazhinji emeso akagadziridzwa, iyo nyowani yakatsiga iri Linux 5.14. KDE yakagamuchira Gear 21.08.1 uye Plasma 5.22.5, Maui-Kit yakagadziridzwa kuva v2.0.1 uye WINE kune v6.16. Kune rimwe divi, mapakeji akagadziridzwa mune zvese zvishoma, uye Calamares yakagadziridzwa, semuenzaniso, mune izvozvi unogona kusarudza iyo faira sisitimu yekuparadzanisa manyore kana yakagadziridzwa rutsigiro rwe btrfs. Zvekuiswa kwe btrfs, iyo default subvolume layer yakagadziridzwa kuitira kuti makopi aparadze nzvimbo shoma. Kune rimwe divi, mafaira ekutsinhana ave kutsigirwa mu btrfs.
Vashandisi varipo inogona ikozvino kugadzirisa zvakananga kubva kuPamac kana kuburikidza neterminal nemutemo Sudo pacman -Syu. Mifananidzo mitsva haisati yasvika kune iyo Manjaro portal, asi inogona kutorwa pasi kubva kune chinongedzo chetambo nezve Manjaro 2021-09-04 iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Iwo epamutemo edhisheni anowanikwa mune zvakajairwa uye mashoma muXfce, KDE, uye GNOME.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.1.2 (2021-09-04) yakauya neLinux 5.14, Plasma 5.22.5 uye WINE 6.16
Photopea, yepamhepo Photoshop dombo, yemahara uye iine akawanda emabasa ayo
Mari yemahara software "Kuisa hanzi"